Zvimwe Zviratidzo Zvinoratidza Iwe Unogona Kuedza Paweekend | Linux Vakapindwa muropa
Zvimwe zvinoratidza paSnap iwe unogona kuedza pavhiki
Iko kune kuseka kwekare nezve mugadziri uyo akaneta nekuve nemidziyo gumi yekuita rimwe basa uye akafunga kupedzisa izvo nekugadzira mukadzi wechikadzi akaunza pamwechete zvakanakisa zvepamusoro. Ikozvino pane gumi nematatu maturusi.
Ini handizive kana Linux yaida yega-yaive nepakeji fomati yekuwedzera kune echinyakare mafomati ekugovera kwese, asi isu tine matatu kusvika parizvino, uye mamwe mashoma angangoonekwa.
Zvazvino-zvirimo mapakeji zvinoshandiswa izvo pane yavo yekuisa midhiya zvinosanganisira zvese zvinoenderana zvavanoda kuti vashande. Ndokunge, kunze kwekunge varairwa kudaro, ivo havawirirane neiyo inoshanda system. Izvi zvinonyanya kubatsira kuti ugone kuzvimisikidza usinga gadzirise zvinokanganisa zvese zvehurongwa.
Nguva nenguva ndinofarira kuumbiridza zvirongwa zvinoonekwa mumatatu matatu akasiyana. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve iyo Snap fomati, inova iyo inoshandiswa neUbuntu-based kugovera, kunyangwe ivo vachigonawo kuiswa mune vamwe.
1 Zvimwe zvinoratidza paSnap yevhiki
Zvimwe zvinoratidza paSnap yevhiki
Zvakawanda uye zvakawedzera zvekugadzirisa mifananidzo zviripo mugore uye shandisa zvinochengeterwa pamhepo pamhepo kuwana kana kuzvichengeta. Kune avo vedu vanotora yakawanda screenshots, ScreenCloud ndiyo yakanaka application nekuti inotibvumidza isu kutora screenshots tichishandisa keyboard mapfupi uye kuachengeta.
Iyo purogiramu inoisa icon pane yekushandisa iyo inotibvumidza isu kuti tiwane ese mabasa. Tine zvitatu zvekutora
Tora yakazara skrini.
Iwo mapfupi ekhibhodi ndeaya:
Chidzitiro chakazara: SHIFT + ALT + 1
Sarudzo: SHIFT + ALT +2
Hwindo: SHIFT + ALT +3
Sarudzo dzekuchengetera ndedze:
Kuchengetedza kune yakasarudzika server kuburikidza neFTP kana SFTP.
Dana kune chinyorwa muBhash.
Chekupedzisira, iyo wizard inotibvumidza isu kuona kana kuti kwete chirongwa chinotanga nechikamu.
Iyo purogiramu inoisa ne
Mune mawonero angu ndiyo yakanakisa dudziro app yemakomputa edesktop. Iyo inobvumidza iko kutendeuka pakati pemitauro inodarika zana uye, zvirinani sekugona kwandingaite, pamwe chete naDeepl inowana mhedzisiro yepamusoro mukuendesa magwaro kubva kuChirungu kuenda kuSpanish.
Chinyorwa chinofanira kushandurwa chinogona kuiswa zvakananga, chakateedzerwa kubva kubhodhi rebhodhi kana muchimiro chemufananidzo. Panyaya yemifananidzo, hazvidiwe kuti vambochengetedzwa, unogona kutora skrini panguva yaunoda shanduro. Chinhu chinonyanya kubatsira isarudzo yemabhuku emitsara, umo matinogona kuponesa kushandurwa kwemitsara izere.
Translatium inobvumidza iko kushandiswa kwehardware kumhanyisa, iko kushandiswa kwekhibhodi mapfupi, uye otomatiki kududzira kwe clipboard zvemukati.
Kune avo vedu vasingakwanise kutsigira kuve neakawandisa mabhurawuza matabhu kana kunyorera windows kuvhura panguva imwe chete, Rambox inobatsira kwazvo. Iri dhibhodhi rinopa mukana kubva kune imwechete hwindo kune akawanda mashandisiro Webhu. Iwo mavara CE anoratidza kuti inoreva iyo yerudzi vhezheni (Yemahara) sezvo paine mamwe maviri akabhadharwa vhezheni.
Pakati pezvishandiso zvinosanganisirwa pane mamwe eakakosha masevhisi ewebhu ekutumira nekugamuchira email, kushambadzira kwedigital, chat uye masocial network:
Mamwe masevhisi anosanganisirwa ndeaya:
WhatsApp Mutumwa / Bhizinesi: Inoda kuvimbiswa uye chengetedza kubatana neshumiro kuburikidza nhare mbozha.
Outlook (yemunhu uye yebhizinesi vhezheni: Online vhezheni yeMicrosoft email mutengi uye karenda software.
Simplenote: Webhu vhezheni yeiyo application kutora cross-platform manotsi.
TweetDeck: Iyo Twitter webhu kunyorera kubata akawanda maakaunzi panguva imwe chete.
Teregiramu: Mukwikwidzi mukuru weWhatsApp nekusimbisa kune zvakavanzika uye kuti haufanire kuti nhare yako ibatanidzwe.
Mighty Chinyorwa: Kunyorera kutumira mameseji kubva kunhamba yako uye Android nhare.
Mastodon: Iyo yakasarudzika social network zvichibva pane yakavhurika sosi.
Rambox CE inokutendera iwe kuchengetedza iyo bhodhi neyakajairika password uye iyo interface inogona kuturikirwa mumutauro wedu mune izvo zvivakwa.
Iyo yakaiswa nemurairo
Ubuntu, Manjaro uye KDE Neon inounza rutsigiro rweSnap package. Kana iwe uchida kuziva kuti ungaiisa sei mukugovera kwako, pano iwe uchawana ruzivo rwese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe zvinoratidza paSnap iwe unogona kuedza pavhiki
Debian 3 Installer Wechitatu Musarudzo Akaburitswa